Fifampitifiran’ny jiolahy sy mpitandro filaminana Lavo tao Sadabe ny dahalo roa mitam-piadiana mahery vaika
Nampita ny vaovao tamin’ireo mpitandro filaminana manodidina, ny zandary avy ao amin’ny paositra Mangamila mahakasika dahalo mampidi-doza izay miriaria.
Maty voatifitry ny zandarin’ny Borigadin’i Sadabe, taorian’ny fifanjevoana ny roa tamin’izy ireo. Efa nampitandrina ny miaramilan’ny zandarimariam-pirenena fa namaly bontana avy hatrany ireo dahalo izay nitondra fitaovam-piadiana mahery vaika koa ka voatery nampiasa ny basiny ireo zandary mba ho fiarovantenan’izy ireo. Ny alatsinainy teo tamin’ny 2 ora sy sasany tolakandro no nitranga ny sakoroka teo amin’ireo mpitandro filaminana sy ireo dahalo roa nirongo basy mahery vaika vita gasy sy zava-maranitra, araka ny fampitam-baovaon’ny zandarimariam-pirenena Ankadilalana. Teo Ambatomanjaka, ao anatin’ny fokontany Andranomalaza, kaominina ambanivohitra Sadabe, Manjakandriana no nisehoan’ny fifampitifirana. Teo no lavo ireo jiolahy raindahiny roa ireo izay avy any Ambohijafy sy Ambakoreny amin’ny Faritra Analaroa. Azo ireo fitaovam-piadiana teny am-pelatanan’ireo malaso miaraka amin’ny tranom-bala kalibra 12. Araka ny fampitam-baovao azo antoka hatrany, efa nandravarava sy nampihorohoro ny faritra avaratry ny Faritra Analamanga iray manontolo iny ireto dahalo ireto.